हास्य भाषण बुलबुले: तिनीहरू के हुन् र कुन प्रकारका बेलुनहरू छन्? | क्रिएटिव अनलाइन
आज हास्य कमिकाहरू मध्ये एक हो "धेरै पुस्तकहरू" जुन धेरै युवाहरूले पढ्न थाल्छन्। रेखाचित्र र पाठको संयोजनको रूपमा, उनीहरूको लागि यो पढ्न सजिलो छ, र पुस्तक समावेश छैन जुन ती समावेश गर्दैन (वा त्यो स्तरमा छैन)। साथै, छोटो संवादहरू भएकोले, हास्य ब्यबल्समा समावेश गरिएको, तिनीहरूसँग त्यति पाठ छैन र उनीहरूलाई त्यो पनि बढी मनपर्छ।
तर, हास्य फुगाहरु के हुन्? त्यहाँ फरक छन्? तपाईंलाई हास्य र कार्टुनको यस महत्त्वपूर्ण पक्षको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने सबै चीज पत्ता लगाउनुहोस्, र तपाईंले प्रत्येक बेलुनले कसरी विभिन्न कार्यहरू वा भावनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देख्नुहुनेछ।
1 एक हास्य पुस्तक भाषण बबल के हो
2 एक हास्य भाषण बबल का तत्वहरु
2.1 हास्य बबलको सामग्री के हो?
2.2 हास्य पुस्तक बबलमा महाद्वीप भनेको के हो?
3 हास्य भाषण बुलबुले को प्रकारहरु
3.1 हास्य पुस्तक भाषण बबल
3.2 विचार बबल
3.3 हास्य स्यान्डविच: चिल्ला
3.4 हास्य भाषण बबलमा रुँदै
3.5 स्पिच बबल
3.6 हास्य बबलहरू: व्हिसपर
3.7 वर्ग स्यान्डविच
3.8 हास्य भाषण बुलबुले: एकै समयमा कुरा गर्दै
एक हास्य पुस्तक भाषण बबल के हो
हास्य पुस्तक भाषण बबल, एक बेलुन पनि भनिन्छ, यो यस्तो तत्व हो जुन हास्य, कार्टुन वा क्यारिकेचरमा बोल्ने कार्य प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस तरिकाले, यस चित्रको माध्यमबाट, कागजका पात्रहरूलाई "आवाज" प्रदान गर्न अनुमति दिइन्छ, किनकि उद्देश्य भनेको तिनीहरू कहानीमा अन्य पात्रहरूसँग संवादमा संलग्न हुन्छन्।
यी स्यान्डविचको उत्पत्ति १ England औं शताब्दीमा इ England्ल्याण्डमा भयो, जहाँ चित्रकार र कार्टुनिस्टहरूले यसलाई समय-समयमा प्रयोग गर्थे। तर तिनीहरूलाई लगातार राख्न पहिलो कार्टुन होगनको एली थियो, १1895। In मा, एक आउटकॉल्ट हास्य, यद्यपि सत्य यो हो कि यस विषयमा त्यहाँ छलफल भएको छ किनकि केही विशेषज्ञहरूको विचारमा यो त्यस्तो छैन।
युरोप को मामला मा, हास्य स्ट्रिप को लागी केहि समय लाग्यो। उनले १ 1925 २। मा एलेन सेन्ट-ओगान र उनको जिग एट प्यूससँग गरे। र यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने जापानमा उनीहरूले पनी s० को दशक सम्म उनीहरूलाई पर्खनु पर्‍यो। पहिलो? सकोन शिशिदो स्पीड तारो र इचिरो सुजाकी र टेको नागामात्सुसँग ओगोन ब्याट।
एक हास्य भाषण बबल का तत्वहरु
कमिक बबल एक आपसमा दुई अत्यावश्यक तत्वहरू मिलेर बनेको छ: सामग्री र महाद्वीप।
हास्य बबलको सामग्री के हो?
एक हास्य पुस्तक भाषण बबल को सामग्री बनाउँछ भित्र सन्देश सन्दर्भ, त्यो हो, तपाई के व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ। यसमा, यो के हो भनिरहेको मात्र होईन, तर प्रयोग गरिएको प्रकार वा फन्ट, onomatopoeia र भिजुअल रूपकहरू पनि ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
त्यो हो, तपाईं डलरको प्रतीकको साथ, मुटुको साथ, बत्ती भएको बल्बको साथ एक हास्य बबल राख्न सक्नुहुन्छ ... वा प्रतिनिधित्व गर्ने ध्वनिहरू (विस्फोट (बूम)) को रूपमा।
हास्य पुस्तक बबलमा महाद्वीप भनेको के हो?
हास्य पट्टी मा महाद्वीप यो आकार हो। र यो सधैं एक समान हुँदैन। वास्तवमा, यस अर्थमा त्यहाँ खाजा को धेरै प्रकार छन्। अब, त्यो फारम भित्र तपाईसँग दुई फरक भागहरू पनि छन्:
कन्टूर, जुन स्यान्डविचको बाहिरी आकार हो, जसलाई दाँत दाँतहरूसँग हुन सक्छ, बादलको नक्कल गर्दै, बिंदीदार ... पनि, केही भावनाहरू प्रस्तुत गर्न यसलाई हल्का बल्ब, मुटु जस्तो आकार दिन सकिन्छ ...
पुच्छर, पुच्छरको रूपमा पनि चिनिन्छ, जुन सँधै चरित्रतर्फ निर्देशित हुन्छ जुन त्यो बलून उत्सर्जन गर्दछ, त्यो हो, जसले बोल्दछ। जब यो कसैलाई देखाउँदैन, यो "भ्वाइसभर" को रूपमा भनिन्छ। यो सामान्यतया चुच्चोको आकारमा हुन्छ, सधैं बोल्ने व्यक्तिको तर्फ, तर अवसरहरूमा, र हास्य बुलबुलेको रूपरेखामा निर्भर गर्दै, यो परिवर्तन हुन सक्दछ (केवल पट्टि, सर्कलहरू, आदि हुन)।
हास्य भाषण बुलबुले को प्रकारहरु
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, सबै हास्य बब्बलहरू एकै हुँदैनन्। वास्तवमा, त्यहाँ उनीहरूको एक ठूलो विविधता छ र, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई तपाईंको नजिक ल्याउन चाहन्छौं।
हास्य पुस्तक भाषण बबल
यो सब भन्दा सामान्य हो, र विश्वभरमा सबै भन्दा राम्रो पनि चिनिन्छ। का लागि प्रयोग गरिएको छ चरित्रले कार्टुनमा के भनिरहेछ देखाउनुहोस्, त्यो हो, तपाईं अरूसँग कुराकानी। जे होस् तपाईं सँधै समतल र अंडाकार प्रकारको बारेमा सोच्न सक्नुहुनेछ, वास्तविकतामा आकार एकदम परिवर्तनशील हुन्छ (र प्राय: प्रत्येक प्यानेलमा यसलाई फिट राख्नका लागि खाली ठाउँमा निर्भर गर्दछ)।
अब, यदि तपाईं अरू कसैसँग कुरा गरिरहनुभएको छैन तर सोचमा हुनुहुन्छ भने के हुन्छ? वा एक्लो बोल्दै हुनुहुन्छ? ठीक यस संवाद प्रयोग गर्नुको सट्टा, सोच प्रयोग गर्नुहोस्। यो बादल जस्तो हुनु हो। हो, यदि यो बिखेरिएको कुनै कुरा हो र त्यसैले, त्यो केवल त्यस चरित्रको चिन्ता गर्दछ किनकि यो त्यस्तो चीज हो जुन अरूले जान्दैनन्।
थप रूपमा, यो सामान्य रूपमा केही सर्कलहरू द्वारा गरिन्छ, जसले यसले यो संकेत गर्दछ जुन यो चरित्र आन्तरिक भनिन्छ।
हास्य स्यान्डविच: चिल्ला
के तपाईंले एउटा हास्य पढ्नुभयो जहाँ तपाईं चिच्याउनु हुन्छ? ठिक छ, तपाईंले याद गर्नु भएको छ, जब त्यो हुन्छ, स्यान्डविच अब बादलको जस्तो हुँदैन, न त यसको घुमाउरो रेखा हुन्छ, तर शिखरमा। त्यो बाटो, मलाई थाहा छ आवाजमा वृद्धि भएको कुरालाई जोड दिन्छ। यो "विस्फोट" को जस्तो छ।
हास्य भाषण बबलमा रुँदै
वास्तवमा, खाजा को यस प्रकार यो दुबै रुँदै र पसिना दृश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसलाई पानीको दागका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसको चारैतिर, पानीका थोपाहरू छन्।
यसभन्दा पहिले हामीले संवाद हेरेका थियौं तर, यदि चरित्र, एक पज पछि, कुरा गरिरह्यो भने के हुन्छ? ठीक छ, तपाईसँग कुराकानी भयो जहाँ केवल एउटा चरित्र बोल्छ र, त्यसैले दुई स्पीच बब्बलहरू एक अर्कामा जोडिएर प्रयोग भएको छ, ताकि यो देख्न सकिन्छ कि एउटै चरित्र फेरि बोल्दछ, संवाद र संवादको बीचमा पज गर्दै।
हास्य बबलहरू: व्हिसपर
अन्तीममा, तपाईंसँग फुस्काएको हास्य बबल छ। किनभने हो, तिनीहरू पनि फुसफुसाउन सक्छन्। र यसको प्रतिनिधित्व गर्न, ड्यास रेखाहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यो हो, स्ट्रिपहरू जुन पूर्ण स्यान्डविच बनाउँदछन्।
के तपाईसँग कहिले भेट भएको छ वर्ग स्यान्डविच? ठीक छ, यसले स indicates्केत गर्दछ, प्राय जसो केसहरूमा, स्पिकर एक कथनकर्ता हो। वास्तवमा यो कहिले काहिं त्यस्तै भएको घटनाको बारेमा पाठकलाई राख्न प्रयोग गरिन्छ।
यो अक्सर वर्ष, शहर वा देशहरू राख्न वा इतिहासको पक्षको बारेमा कुरा गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ (परिस्थितिमा राख्नुहोस्)।
हास्य भाषण बुलबुले: एकै समयमा कुरा गर्दै
कल्पना गर्नुहोस् जहाँ एक दृश्य छ बिभिन्न पात्रहरूले उस्तै कुरा गर्छन्। ठिकै छ, प्रत्येकको लागि स्यान्डविच लेख्नुको सट्टा, तिनीहरू यसलाई एकलमा समाहित गर्दछ जहाँबाट प्रत्येक चरित्रसँग मिल्ने पूंछ (वा पुच्छ) बाहिर आउँदछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » हास्य भाषण बुलबुले
डाउनलोड गर्न टेम्पलेटहरू पुनःसुरु गर्नुहोस् र आफैंमा प्रस्तुत गर्नुहोस् जस्तो कहिले पनि पेशेवर स्तरमा छैन